Hababka loo hagaajiyo usheeda dhexe
Waxaa jira xalal badan oo loogu talagalay ku xiridda qalabka korontada. Waa kuwan fikrado dhowr ah oo kaa caawin kara rakibiddaada:
Lifaaq leh a hagaajinta fur Lifaaq leh a Furaha iyo Wareegtada
Lifaaq leh a Biinanka sariirta Lifaaq leh a Xirida dameer
Lifaaq leh a Giraanta qufulka Lifaaq leh a Is-saliidaynta baadiyaha
Ku soo ururi qashin
fur waa mid aad u fudud. Waa uun
wuxuu u baahan yahay duleel dun leh inuu ahaado
lagu farsameeyay xarunta, iyo
ka shaqaynta aag fidsan
on usheeda dhexe. Ciidamada ayaa kala ah
xoogga saaray cidhifyada
Koobab madax u ah boolal (GM iyo SM)
Jaangooynta noocan ahi waxay hagaajinaysaa u hoggaansamida
wuxuuna joojiyaa dhammaan barakaca.
Xuddunta la gudbin karo waxay ku egtahay
noocan ah sii kordhaya
Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa hagaajinta
of giraangiraha marsho module hooseeyo.
Daloolka dunta leh ayaa jaango'an dhammaan qalabka 'HPC'.
Adeegsiga furaha ayaa marshada ku dhejinaya usheeda iyadoo la joojinayo wareegga u dhexeeya labada. Jeex jeex jeex ah, ama keyway waa in lagu farsameeyaa ceelka iyo godka. Wax soosaarka wax ku oolka ah, jeexitaanka jeexitaanka godka waa inuu dhex maro dhammaan balaca qalabka.
Fure isku mid ah - waa afargees
gabal bir ah, badhkeed gundhig iyo
kala badh usheeda dhexe iyo xudunta. Qalabaynta
of jeexdin ee usheeda dhexe waa la sameeyey
iyadoo lagu kaashanayo labo qalab oo goyn kara.
Wadada muhiimka ah ee noocan ah waxay kufiican tahay gudbinta heerarka dhererka sare.
Furayaasha (ama nus nus) furayaasha waxaa loo isticmaalaa gudbinta lamaanaha daciifka ah. Farsameynta dariiqa usheeda dhexe si fudud ayaa loo sameeyaa iyadoo la isticmaalayo seddex goy oo bladaysan.
-> Dariiqa muhiimka ahi ma joojiyo dhaqdhaqaaqa foosha ee nidaamka. Sidaa darteed waa in lagu daraa nidaam kale oo quful, sida a dun iyo bool, ama si fudud, oo ah wareegga wareegga.
Lifaaq leh wareegyo
Goobo goobaabin, jooji dhaqdhaqaaqa axial inta udhaxeysa laba shay.
Waxaa jira laba nooc oo wareegga wareegga ah, mid loogu talagalay fuulitaanka wiishka iyo mid loogu talagalay gudaha ceelka.
Ka-faa'iideysiga cunsurradan waxay u baahan yihiin jeexdin lagu gooyo ceelka ama wiishka. Kadibna waxay ku rakiban yihiin axialy, laga soo bilaabo hal daraf ama wiish iyadoo la adeegsanayo qalab khaas ah. Attention, dhexroor nadiifin ugu yaraan (ama ugu badnaan) ayaa loo baahan yahay rakibaadda.
Isticmaalka kumbiyuutarradan ayaa inta badan lala xiriiriyaa a KEYWAY isku imaatinka ciyaarta ama qalabka wax lagu boodboodo.
Ku soo ururin biinanka sariirta
Pin-ka santuuqa wuxuu leeyahay saamaynta kicinta hal shuruud marka loo eego mid kale, oo lagu hubinayo meelaynta saxda ah ee labada qaybood, ama gudbinta dhaqdhaqaaqa. Waxay kaloo ka ciyaari kartaa door amni iyadoo iska xiirid haddii ay dhacdo lacag dheeraad ah oo rabshad ah.
Asal ahaan, biinku wuxuu ku xiran yahay xiirid, sidaas darteedna waa in loo adeegsadaa kiisaska meesha ay ku yar tahay xaddiga ku lug leh. Isticmaalkeeda laguma talinayo halka ay lagama maarmaan tahay ka saaristu. Daloolinta daloollada godadka ayaa guud ahaan la sameeyaa ka dib marka la isu geeyo shandadaha si loo hubiyo in la been abuuray isku waafajinta
Adeegsiga biinanka loo yaqaan 'cylindrical cotter pin pin' wuxuu u baahan yahay qalabaynta saxda ah daloolka godka iyo marshada. Dalool qallafsan ayaa kufilan maxaa yeelay biinanka ayaa isku hagaajin doona iyagoo ku qalooca fadhigooda.
Hantidan ayaa siisa iyaga caabin aad u wanaagsan oo gariirka ah.
Isku soo wada duub noocan ah ayaa ku fiican giraangiraha ilkaha yar yar ama isweydaarsiga, ama qalabka leh modules hoose.
Ku rakibida golaha qufulka.
Adoo adkeeya boolal, adeegsadaha ayaa qaabeeya giraanta suuliga, wuxuuna keenaa xoog xoog leh inta udhaxeysa usheeda dhexe iyo ceelka. Been abuurka la helay waa mid dhameystiran oo adag (ie dhabar jabis la'aan), oo si fududna looga saaro.
Adoo iska ilaalinaya shilalka soosaarka ee sababi kara inta la jarayo dariiqyada muhiimka ah iwm.
Dhexroorro isku mid ah, lamaanaha la isu gudbin karo ee leh qaabkan ayaa aad uga sarreeya. Shaqada laga qabanayo wiishka iyo ceelku waxay ku egtahay caymiska H8 / h8 iyo dusha sare ee ugu yaraan Ra = 1,6mm shirarka isxilqaan (RT25 iyo RTL450).
Tilmaame waa in laga fikiraa golayaasha kale. Kulamadan quful-darrada ah waxaa lagula talinayaa dhammaan noocyada giraangiraha ilkaha, iyo gaar ahaan kuwa isweydaarsada, is-weydaarsiga iyo geerka leh garoonno waaweyn ama qaybo muhiim ah.
Lifaaq adoo xiraya giraan
Lifaaqa giraanta qufulku waa hab dhakhso leh oo hufan oo lagu dhejiyo dhammaan noocyada giraangiraha ilkaha leh. Laba xal ayaa jira, oo lagu xirayo badhkood giraan quful (nooca CT), ama lagu xirayo gargaar kalarka buuxa (CC).
ISTICMAALKA QALABKA wareega wareega (CT)
Xalkan koowaad wuxuu ku saabsan yahay farsameynta iyo ka saarista kala badh xudunta marsho iyo daloolinta labada god ee dunta leh inta ka hartay xarunta.
ISTICMAALKA WALIGII LAGU XIRAY (CC)
Xalka kale waxaa ka mid ah jarista xudunta iyo ka shaqeynta laba kanaal - sida ku cad jaantuska .
Labada xaaladoodba, natiijadu waa wada jir gebi ahaanba adag, taas oo si fiican ugu habboon gudbinta heerarka sare ee miisaanka.
Isku soo wada duub adoo isku miiranaya baadiyaha.
Nidaamkan aadka u fudud wuxuu bixiyaa hagitaan wareeg ah oo lagu kalsoonaan karo, fudud oo hufan. Waxay maamushaa xaddidaadda khilaafka u dhexeeya usheeda dhexe iyo ceelka iyadoo la kaashanayo laba duur oo isku shubmaya (nooca QAF ama QAG), isla mar ahaantaana, joojinta dhaqdhaqaaqa foorara ee shayga wareegaya.
Walxaha qufulka ee ugu wax ku oolka ah ayaa ah qufulka siddo (CT ama CJ). Iyagu ma laha wax shuruud ah oo loogu talagalay farsameynta khaaska ah waxaana lagu dhejin karaa meel kasta oo ka mid ah usheeda dhexe, taas oo u oggolaanaysa hagaajinta booska barta udubdhexaadka ah.
Qufulka qoorta CJ:
Qufulka qoorta CT :
Isticmaalka is-saliidaynta Ollite QAG ama dhirta QFM ayaa dulqaad dulqaad ugu badnaan ah f7 dul heehaabaysa iyo H8 ceelka (eeg ISO 2795 iyo 2796).